Sheekada filimka Raju Gari Gadhi 2: Nagarjuna iyo gabadha uu sodag u yahay Samantha maxaa kala qabsaday | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Raju Gari Gadhi 2: Nagarjuna iyo gabadha uu sodag u yahay Samantha maxaa kala qabsaday
Sheekada filimka Raju Gari Gadhi 2: Nagarjuna iyo gabadha uu sodag u yahay Samantha maxaa kala qabsaday
Waxaa jimcadii aan kasoo gudubnay tiyaatarada la saaray filimka Telugu ah Raju Gari Gadhi 2 ee hogaamiye ka yahay Super Star Nagarjuna waana filim sheekadiisa siweyn loo wada amaanay.
Raju Gari Gadhi 2 waa qaybta labaad filimka Raju Gari Gadhi kaasi oo sanadii 2015 ganacsi ahan guuleestay sidoo kalena sheekadiisa laga helay.
Filimka Raju Gari Gadhi 2 waxaa isaga hor imaadeen Nagarjuna iyo atirishada uu dhawaan sodoh u noqday Samantha Ruth Prabhu oo hada la baxday Samantha Akkineni madaama uu dhawaan guursaday Nagarjuna wiilkiisa Naga Chaitanya Akkineni uu xidigtaan guursaday.
Jilaayaasha filimka Raju Gari Gadhi 2: Nagarjuna Akkineni, Samantha, Seerat Kapoor, Rao Ramesh
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 7-daqiiqo.
Fariinta Filimkan oo kooban: Sedex saaxiibo ah oo dhalinyar Ashwin (Ashwin Babu), Kishore (Vennela Kishore), Praveen, (Praveen) ayaa ganacsi ka furanayaan xeebta balse ganacsigoodii hormarka sameenayay waxaa caqabad ku noqonaayo qof reer aaqiraad ah oo dhib ku heyso.
Sedexdii dhalinta yaraayeen markii ay cabsidaka badato sidoo kalena ay ganacsigooda xeebta kaga furan wadan waayaan waxay garab weydiisanayaan dhaqtarka dadka sida maskaxiyan u daaweeyo Rudra (Akkineni Nagarjuna) wuxuuna adeegsadaa xeelado kala duwan awood gaar ahna wuu leeyahay.
Rudra wuxuu ogaanaa reer aaqiraadka xeebta dhibka ku haayo inay tahay gabbar lagu magacaabo Amurtha (Samantha Akkineni) taasi oo jawaab u raadineyso ruux ahaan sababtii loo dilay.
Rudra wuxuu ka balan qaadaa Amurtha (Samantha Akkineni) inuu caawinayo kadibna ruuxdeeda ayaa kaga sheekeyneyso dhibaatadii loo geestay in Video ama muuqaal laga duubay ayadoo qubeesaneyso kadib Internetka lagu faafiyay ceeb awgeed aabaheed ayaa u dhimanaayo kadibna waxay go’aan ku gaaree inay is disho.
Rudra wuxuu baaritaan u galaa qofkii ka dambeeyay in Amurtha (Samantha Akkineni) la ceebeesto kadibna inay is disho wuxuuna ogaanaa in kiiskaan ka dambeyso Kiran (Abhinaya) oo uu dhalay siyaasi caan ah kana maseersaneed caanimada iyo naxariista Amurtha bulshada ku dhex laheyd.
Amurtha (Samantha Akkineni) marka ay xaqiiqada ka ogaato Rudra waxay go’aan ku gaaree inay disho Kiran balse waxaa ka hor imaanayo go’aankeeda Rudra oo xasuusinaayo wanaagii abaaheed kusoo bar baariyay.
Hadaba Amurtha (Samantha Akkineni) ma dili doontaa Kiran mise waxay aqbali doontaa talada dhaqtar Rudra oo marwalbo xasuusinaayo wanaagii aabaheed looga bartay oo ahaa in qofka xumeeyo xitaa wanaag lagu soo dhaweesto?
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Raju Gari Gadhi 2: Director Omkar filimkaan cabsida iyo shactirada badan si wwacan oo xeelad ku dheehan ayuu u diyaariyay kaliya dhaliisha uu leeyahay waxay tahay in fagta hore lagu caajisayo laakiin markii Nagarjuna uu filimka soo galo sidoo kale isaga iyo Samantha isla jaan qaadaan inaba caadi ma ahan.
Filimka Raju Gari Gadhi 2 sidoo kale wuxuu ku wanaagsan yahay in qiiro badan leeyahay sidoo kalena cabsida si wacan loo sameeyay.
Bandhiga Jilaayaasha Filimka Raju Gari Gadhi 2: Hadii Nagarjuna uusan ahaan laheyn filimkaan kuma xiiso galin laheyn, halyeegaan bandhig heer sare ah ayuu la yimid waana ruuxda filimkaan oo wax walbo isku xiraayo qaab jiliin cajiib badan ayuu filimkaan xiisaha badan ku muujiyay.
Samantha oo reer caaqiraad mataleyso sidoo kalena ah dhibane doorkeeda waa mid xiiso badan kuna soo jiidanayo laakiin dhamaadka filimkaan ayay la timid qaab jiliin saameyn xoogan daawadayaasha ku yeeshay.
Dhamaan jilaayaasha kale ee doorarka caawiyaha filimkaan ku mataleen waa kuwo sheekada muhiim u ah sidoo kalena qeybo wacan la siiyay.
Gunaanad: Raju Gari Gadhi 2 waa filim xiiso badan oo fagta hore xoogaa gaabis ka muuqdo laakiin kala barka marka la gaaro ilaa dhamaadka indhaha lagama qaadi karo.
Markale Telugu waxay la imaadeen filim soo jiidasho leh ilaa haatana dadka filimada ka faaloodaa fariinta filimkaan amaan ayay kala dul dhacayaan waxayna cel celis ahaan siiyeen 3/5 waana filim wacan oo la daawan karo.
Filimka Raju Gari Gadhi 2 dhanka Boxoffice-ka hal todobaad ayaa ku filan madaama lacag yar lagu iibsaday sidoo kalena sheekadiisa laga wada helay waa hubaal in sedexda maalmood ee ugu horeyso guul wacan ku gaari doono.
2 Responses to Sheekada filimka Raju Gari Gadhi 2: Nagarjuna iyo gabadha uu sodag u yahay Samantha maxaa kala qabsaday
Lkn sxbow ma sodog ayuu u yahay mise sodoh
Mahad sanid sxb sare waan saxnay sodag ayaan ka dhignay.